Masuuliyiinta Wasarrada Waxbarashada oo Ka qeyb galey munaasabad lagu soo bandhigayey wax qabadka Jamacada Umada | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Masuuliyiinta Wasarrada Waxbarashada oo Ka qeyb galey munaasabad lagu soo bandhigayey wax...
Masuuliyiinta Wasarrada Waxbarashada oo Ka qeyb galey munaasabad lagu soo bandhigayey wax qabadka Jamacada Umada
munaasabadaan ayaa waxaa ka qeyb galaya wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka waxana ku wehlinayay wasiirka ku xigeenka wasaarada waxbarshada, gudoomiyaha jaamacada umada iyo qeybha kala duwan ay ka koobantahay jaacadama umada.
forsiyo c/raxaamana warsame waa madaxa kuliyada waxbarshada jaamacada ummada wax ay ardayda u sharaxdey wax yaaba u qabsoomay jaamacada umada iyo heerarka ay soo maratay jaamacada.
gudoomiyaha jaamacada umada soomaaliyed prof maxamed axmed jimaacde oo ka hadalay munaasabada ayaa sheegay in qorshaha sanadkaan uu yahay in la kordhiyo kuliyada kale oo muhiim u ah ardeyda dooneyso in ay ku soo biiraan jaamacada umada.
Wasiirka wabrashada hidaha iyo tacliinta sare mudane C/raxmaan daahir cusmaan oo ka jawaabaya su’aalaha tooska ahaa ayaa sheegay in wasaarada ay qorsheyneyso sidii ardaya dhameysata heerka koowaad jaamacada umuda loo tababri doono macalinmo si aqoontooda loo dhameystiro .
Previous articleWasaaradda Gaadiidka Hawada iyo Duulista xukumada Federalka Soomaaliya oo soo saartey sharciga gaadiidka
Next articleDowllada Gobolleedka Galmudug oo soo saartey xeer lagu joojinaayo iibinta dhulalka